Loltoonni Zimbaabwee namoota hiriira bahan hiraarsuudhaan himataman - BBC News Afaan Oromoo
Loltoonni Zimbaabwee namoota hiriira bahan hiraarsuudhaan himataman
Goodayyaa suuraa Hiriira daballii gatii boba'aa mormuuf ba'ame
Gareen Quuqamtoota Mirga Namoomaa kan mootummaa Zimbaabweetiin hundeeffame ,loltoonni biyyattii humnaan namoota hiriira ba'an bittimsuu fi itti karoorsee hiraarsuu isaatiif himateera.
Komishiniin Mirga Namoomaa Zimbaabwee aanga'oonni loltootatti fayyadamuun hiriirtota gidirsuu isaanii cimsee qeeqeera.
Hookkarri kun torban tokko dura wayita gatiin boba'aa garmalee dabalu kan eegale ammallee cimee itti fufeera.
Erga jeequmsi eegalee gabaasi ba'aa jiru akka ibsutti humnoonni nageenya eegsisuuf ba'an ajaja aanga'oota biyyattiirraa fudhachuun magaalaa Hararee keessatti uummatarratti gocha suukanneessaa raawwachaa jiru.
Qarshiin korojoo guutuu Mugaabee jalaa hatame
Filannoo Zimbaabwee booda namootni sadii rasaasaan ajjefaman
Zimbaabweetti mormiin daballii gatii bobo'aarratti eegale lubbuu namaa gaaga'e
Loltoonni biyyattii haalaan uummatatti bobbaafamanii jiraachuu magaalaa Hararee irraa ka gabaase gaazexeessaan keenya Andrew Harding namoonni loltootaan marfamanii reebamaa jiru jedheera.
Hookkarri utuu walirraa hin citin itti fufaaru kun Pirezidaanti Emersan Mnangagwan ,loltoota ji'a 14 dura gara aangootti isaan fiduu keessatti qooda olaanaa gumaachan kanneen hagam ajajaa jiru kan jedhu gaaffii keessa galcheera.
Pirezidaantichillee wayita aangoo qabatan sana gidiraa hawaasarra ga'u kamiifiyyuu araaramni akka hin jirree fi gidiraa hawaasarra ga'aa ture hambisuuf waadaa seenanii turan.
Pirezidaantiin kun kan silaa gara Awurooppaa imaluuf turan sababa jeequmsa biyyasaaniitiin hafaniiru, fooramii diinagdee addunyaa Deevoositti taa'amurratti argamuun kan silaa waa'ee investimentii biyyasaaniif haala mijeessuuf turanillee carraansaa jala darbeera.
Hookkara uumame kanneen si'eessaa jiran paartilee mormitootaati jedha mootummaan.
Paartileen mormitaammoo murtii mootummaan daballii gatii boba'aarratti dabarse waan mormaniif miseensonni isaanii hidhamuu fi reebamuu ibsaniiru.
Maddi rakkoo sakatta'amee furmaati ni kaa'ama kan jedhanii Pirezidaanti Emersan Mnangagwaan dubbatanillee hin amannu jedhan mormitoonni.
Zimbaabween gadaa Mugaabee booda filannootti jirti
Zimbaabuween 'Commonwealth'tti na deebisaa jette
Sababni isaas inni nama jechasaa kabaju miti, nama amanamaa miti, kanaan durallee waadaa hedduu seenee utuu hin raawwatin hafeera jedhan.
Kan har'a biyyattii hookkara keessa galchellee dogoggora isaati jechaa jiru.
Filannoo Zimbaabuwee: Mormii cimaan deggartoota paartii morkataan ka'eera.
Emersan Mnaangaagwaa pirezidaantii haaraa Zimbaabuwee ta'uun kakuu raawwatan